10 pesdị Mgbasa Ozi Email Email Kwesịrị Imme | Martech Zone
Na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị na-ere ozi email, ọ na-atụ m mgbe niile na enwebeghị usoro eji arụ ọrụ, arụ ọrụ triggered email mkpọsa n'ime akụkọ banyere mmejuputa ya. Ọ bụrụ na ị bụ ikpo okwu na-agụ nke a - ị kwesịrị ịnwe mkpọsa ndị a iji gaa na sistemụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa email, ị kwesịrị ị na-arụ ọrụ iji tinye ọtụtụ ụdị ozi ịntanetị na-akpali akpali ị nwere ike ịbawanye njikọ, nnweta, njigide na ohere ọfụma.
Ndị na-ere ahịa na-anaghị eji mkpọsa ozi email na-efu ugbu a. Ihe omuma ohuru nke Ee Lifecycle Marketing's latest benchmark report na-ekpughe na ebe ihe na-akpata na-eto eto na nnabata, ihe ka otutu ndi ahia ahia adighi eji usoro a di mfe. Triggers mebere naanị n'okpuru 7% nke mkpokọta mkpọsa ndị na-ere ahịa ezigara ma mepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro 5 ọnụego pịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke emeghe ọnụego na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ nke ọnụego CTO.
Budata Ee Life Life Marketing's Report
Kedu ihe bụ ozi ịntanetị na-akpali akpali?
Ozi ịntanetị akpalitere bụ ozi ịntanetị sitere na omume, profaịlụ, ma ọ bụ mmasị nke onye debanyere aha. Nke a dị iche na nke a na-ahụkarị, nnukwu ozi mkpọsa ozi a na-egbu na akara akara ama ama ama akara aka.
N'ihi na mkpọsa ozi email na-emetụta omume na oge mgbe onye na-edebanye aha na-atụ anya ha, ha na-enweta nsonaazụ dị elu ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa dịka ọ na-adị (BAU) mkpọsa email dị ka akwụkwọ akụkọ. O nweghi uzo ozo di nma karie nke oma.
Ọnụ ego ọnụahịa (AOV) maka ozi ịntanetị na-abụghị nke kpatara bụ $ 56.34 ma e jiri ya tụnyere $ 61.54 maka ozi mkpalite
Mgbe ị na-ele anya naanị na mkpọsa kpatara, ozi ịntanetị Satọdee e zigara na Q1 nwetara ọnụọgụ ntụgharị 8%, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke Satọde
Ọ bụ ezie na 65% nke ndị na-ere ahịa anabatala mkpọsa Nnabata na Q1 2016, ọnụọgụ ahụ toro na 7% karịa afọ gara aga
Broaddị sara mbara nke mkpọsa email na-adaba n'okpuru ndụ ndụ, azụmahịa, ntụgharị ego, usoro ndụ ndị ahịa, na ịkpalite oge. Karịsịa, mkpọsa email butere gụnyere:
Ekele Email - Nke a bụ oge iji dozie mmekọrịta ahụ, ma nye nduzi maka akparamagwa ịchọrọ ịme.
Ozi ịntanetị na - Mgbe ụfọdụ, ndị debanyere aha gị chọrọ a Kwaa iji nyere ha aka melite akaụntụ ha ma ọ bụ bido iji igwe okwu ma ọ bụ ụlọ ahịa gị.
Ọrụ mmalite - Ndị debanyere aha ha rụọ ọrụ mana ha etinyeghị aka ozugbo nwere ike ịrata ha ime email ndị a.
Email reactivation - Re-ekere òkè ndị debanyere aha na-adịghị zaghachi ma ọ bụ pịa site n'ime gị zụọ okirikiri.
Email na-edegharị aha - Mgbasa mkpọsa ịzụ ahịa ahapụgoro na-aga n'ihu na-eme mgbanwe kachasị maka ndị na-ere ahịa email, ọkachasị na oghere ịntanetị.
Email azụmahịa - Ozi ọrụ bụ oke ohere ịkụziri atụmanya gị na ndị ahịa yana ịnye ha ohere ịmekọrịta ndị ọzọ. Gụnyere gụnyere e-nnata, nnabata nkwenye, iwu azụ, nkwenye usoro, nnabata nkwenye na nloghachi ma ọ bụ nkwụghachi email triggers.
Email Email - ificationsma ọkwa maka ndị na-eri ngwaahịa mgbanwe na akaụntụ ha, dịka mmelite okwuntughe, mgbanwe nye email, mgbanwe profaịlụ, wdg.
Email Omume nke Onwe - daybọchị ọmụmụ, ncheta, na akara ngosi onwe onye ndị ọzọ nke nwere ike inye onyinye ma ọ bụ njikọ aka pụrụ iche.
Email Ekele - Ekele ozi maka ndị debanyere aha ha ruru akara ngosi dị mkpa na ika gị.
Ezigbo oge ịkpali - Weather, ọnọdụ, na ihe omume dabere na triggers itinye aka na miri emi na atụmanya gị ma ọ bụ ndị ahịa gị.
Ọmụmụ ihe ahụ kwadoro ndị na-ere ahịa ga-erite uru site na itinye n'ọrụ sara mbara na ndị ọzọ agwakọtara mkpọsa na adọta na a Nchikota triggers ka mma itinye aka na tọghata ahịa. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịchọta onwe ha ka ha na-enyocha atụmatụ ha na-ebute mkpọsa n'oge oge ịzụ ahịa na ụlọ akwụkwọ na oge ezumike oge ezumike.
Tags: nkezi iji uruazụ iji emailnkwenye emailemail Marketingihentughariemail reactivationna-emegharị ahụchegharịa emaillaghachi email nkwụghachiemail nkwenye izipuazụmahịaazụmahịa azụmahịakpaliteịkpalite ihekpaliri emailtriggered email mkpọsatriggered email ụdịwelcomennabata emaileeee ahia ndu